Gaas: Waan in meel looga soo wada jeesto Kuwii weeraray Xamar iyo Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaardho – Mareeg.com: Madaxweynaha mamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ku taliyey in si wadajir ah la isaga kaashado la dagaallanka kooxihii weerarada ka geystay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo caasimadda Jabuuti ee Jabuuti.
Gaas oo hadal ka jeedinayey boqor lagu caleema saarayey magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa sheegay in loo baahan yahay in Soomaalida oo mid ah ka wada hortagaan qolooyinka weerarada ka geysta goobaha muhiimka ah.
“Cadowgaas tirada badan ee Xamarna ku weeraraya baarlammaanka, Jabuutina dadka ku ku laynaya, halkanna dhibta ku haya, waa inaan meel uga soo wada jeensano, anagoo Soomaali ah oo mid ah oo dowladnimo iyo wanaag raadineyna” ayuu yiri Gaas.
Habeen hore ayaa qarax ka dhacay baar ku yaallada caasimadda Jabuuti waxaa ku dhintay 3 ruux, halka tiro bandanna ku dhaawacmeen. Mana jirto cid weli sheegatay weerarkaas.
Dhanka kale, sabtidii ayaa Alshabaab weerara ismiidaamin ah iyo qarax ah ku qaadeen xarrunta golaha shacabka, waxaana ku dhintay ku dhawaad 20 ruux.